by UBryan Hughes
Uvukile ixesha elithile kwaye uziva ukhululekile ukukhwela kwaye uphendulela ibhodi, kodwa makhe sijamelane nayo - isizathu sokuba ungene kule mdlalo kwindawo yokuqala kwindawo. Ngoko kunzima kangakanani na? Uvele ufanele ugibele ngokukhawuleza njengoko unako kwaye ugxume kunzima njengoko unako ukuphuma phezulu-kunene? Ewe, hayi kanye. Ukuhlahlela kwi- wakeboard akuyiyo inzululwazi yesayensi, kodwa kuninzi kunokuba ihlangabezane nelihlo. Ngoko ukuba ulungele ukuqala ukufumana ezinye iikhilomitha ezihamba phambili emva kwekhephe , ngoko konke okufuneka uyenze ukufunda ezi zinyathelo ezintathu eziphambili.
Ukufunda i-Edge Edge
Xa ubukela i- evaboarders pro, kuba cishe bengakholwanga ukuba bangavelisa njani ukukhawuleza kwaye baphume phezulu phezulu. Esinye seziqhosha ezinkulu kukukwazi ukugcina umgca wokuqhubeka. Ngokucacileyo, umgca wokuqhubela phambili xa uhamba ukuya ngasekuhlaleni, uqala ngokukhawuleza okokuqala kwaye uhamba ngokukhawuleza kwaye ukhawuleze uze ufike kumlomo ukuze ufumane umoya. Ukuze uyiphule ngakumbi, cinga ngebhola eliphazamisayo. Xa iqala ukuguqula ibhola iya kuthoba xa ibuya emva kwesakhiwo. Kodwa xa ikhishwa iyaqala ukuhamba ngokukhawuleza kwaye ifikeleleke kude kube nefuthe. Ukubambisa amandla ophuhliso oluqhubekayo ekuphumeni kwakho, nqakraza ude ude udibanise intambo yakho. Emva koko, nqumla ukuya ngasekuqaleni, kodwa uqale ngokukhawuleza ukumba izithende okanye iinzwane zakho zibe nzima kunzima njengoko intambo ikhula ngakumbi. Ukuze ukhangele le nto, zama ukukhetha i-angle kwaye ugcine iso lakho kwindawo apho ufuna ukuya khona.
Yima ephakamileyo kunye nokuphakama
Xa uqala ukuvusa, isisiseko sakho sokuqala siya kuba ukuzama ukuxhuma ukusuka phezulu. Kwaye kubonakala kunengqiqo ukunika ukukhaba okukhawulezayo ukusuka phezulu kwendlela. Kodwa enyanisweni, ukukhanya okukhulu kwenzeka emva kwexesha elithile ngaphambi kokuba uqhube. Njengoko usondela kumvu uya kuphawula ukuba kukho ididi encinci ekhokelela ekungeneni. Xa uphantsi komgca we-dip stand long kwaye gcina imilenze yakho iqonde. Oku kuya kukunceda ukuba uthathe konke ukukhawuleza kunye nobumnandi bekampu ekufuneka uzinikele. Emva kokuba ushiye umlomo, gxumela amadolo akho phezulu ukuya esifubeni sakho ukuze ukwandise ukuphakama kwakho. Ngoku, ngoku, abantu abaninzi baya kuphosa isandla esisodwa emoyeni ukuze bazame ukuzilinganisa phakathi kwomoya. Ezi ziqhelo eziqhelekileyo zibizwa ngokuba yi "rodeo," kuba kukubangela ukuba ukhwele inkunzi yenkomo ngesandla esinye kwintambo kunye nesandla esinye phezulu kwentloko yakho. Ukuzigcina uzigxininise ngelixa i-airborne izisa intambo ecaleni kwesinqe sakho kwaye igcine ikhanda lakho likhangele phambili kwindawo yakho yokufika.
Izwe elimnyama kwaye lihambe
Ekuphakameni kwempembelelo yakho, kufuneka uqale ukhangele indawo yakho yokufika. Emva kokuba uvale kwindawo yakho yokungena, thintela ukukhomba impumlo yebhodi yakho phantsi, njengoko oku kungakhokelela ekuhlaleni okuhle kakhulu. Endaweni yoko, gxininisa ukugcina amavi akho egobile kwaye ubeke umsila wakho ngaphantsi kwelo phaya. Ukulondoloza imilenze yakho kwimpembelelo kunokubangela ukuba uxhamle amanxeba akho kwaye kubangele nokulimala okuntle, ingakumbi ukuba uhlala kwiiflethi. Ekugqibeleni, njengoko ugibele, gcina i-angle efanayo kwimizuzu embalwa. Oku kuya kuqinisekisa ukuba awufumani umgca okanye ufike ngaphambi kwexesha.
Fly njengoba nje ngokuba Unakho
Ukufunda ukunyuka ngokufanelekileyo kubalulekile ukuba yi-wakeboardser ejikeleze kakuhle. Kwaye ukuqonda izinto eziza kusetyenziswa kuyakunika isiseko oyifunayo ukuze wenze amacandelo amakhulu kwaye angcono. Kuthatha iminyaka yokusebenza ukuqhuba ukuzula okugqibeleleyo rhoqo, ngoko gcina kuyo. Kuza kuhlala kusehla apho uthabatha khona ukuwa okukhulu, ukhupha i-axis, okanye u-funky land. Nangona kunjalo, qhubeka usebenza kuyo, ngeendlela ezimbalwa uza kuhamba ezindiza phezulu kunanini ngaphambili.
I-All-Important Bowling-Ball Core
Iingqungquthela ze-Jeremiel Imisebenzi kunye neMpawu
Ziziphi iZikolo zeeGrey zifuna abafundi?
Ukuzalwa kwakhona: Ubungqina obugqwesileyo
Quotes Amelia Jenks Bloom
Amagama ayenziwe esebenzisa iiMpawu zeeThebula zePeriodic Table Element
Ukukhusela okuKhuselekileyo kwiTlanzi neeBiliyadi
Uhlalutyo lwabantu 'Abahamba Ngama-Omela' nguLe Guin
Inzuzo yeRamadan Fast for the Muslims
Yintoni ebonisa indlela kwiNtetho yaseMerika yaseMelika
Yonke Into Okufuneka Uyazi Ngokuthenga Ngomhla kaNtsundu